Qalabka Horumarinta Wireframe waxay yeelanayaan isdhexgal | Martech Zone
Sabti, Noofembar 20, 2010 Axad, Febraayo 17, 2013 Douglas Karr
Sannadkii la soo dhaafay, waxaan la halgamayay sidii aan u heli lahaa qalab silig ah oo fudud, oo lagu daray aalado iskaashi ah, oo runtii lahaa qaybo is-dhexgal ah oo ku dayanaya sida walxaha HTML iyo walxaha ay dhab ahaan u shaqeeyaan. Raadintaydu waxay ku dhammaatay Hotgloo.
Ka socota degelkooda: HotGloo waa codsi internet hodan ah oo loogu talagalay in lagu dhiso siligyo internet oo shaqeynaya oo loogu talagalay degel ama mashruucyada webka. Abuur oo wadaag wada-hadallada noocyada tooska ah ee internetka. La shaqee asxaabta lana wadaag wax soo saarka macaamiisha. HotGloo waa ciyaar kufiican qofkasta oo kashaqeeya mashaariicda webka.
Waxa aan ugu jeclahay Hotgloo waa awooda lagu daro waxyaabo shaqeynaya sida isdhexgalka taabashada, heshiisyada, khariidadaha iyo jaantusyada. Cunsur walba oo aad ku rido bogga runti waa mid is dhexgal ah ... sidaas darteed waxaad ku siin kartaa macmiilkaaga a shaqeeya, siligga is-dhexgalka leh halkii si fudud loo sii sawiri lahaa oo aan wax is-dhexgal ah la sameyn karin. Toddobaadkan usbuucii la soo dhaafay, waa inaan u diraa silsilado xarig ah, iyo 'Hotgloo', waxay igu qaadatay wax ka yar 2 saacadood si aan ugu hagaajiyo goob dhan bogag badan iyo is-dhexgal.
Macmiilkaagu xitaa wuxuu fursad u haystaa inuu qoraal ugu soo jiido nooca hore oo uu faallo ka bixiyo ama uu uga tago su'aalaha dhammaan. Haddii aan hal jeclaan lahaa Hotgloo, waxay noqon laheyd inaan codsado bogag hoosaadyo. Waqtigaan la joogo, bogagga oo dhami waxay ku yaalliin hal liis oo ku yaal dhinaca bidix. Lahaanshaha qaybo ama awood lagu daro bog hoosta hoostaga bogga ayaa fiicnaan lahayd in la abaabulo goobo ama mashruucyo adag.
Qiimaha waa mid aad u macquul ah, oo ka bilaabma hal isticmaale oo ah $ 7 bishiiba illaa nooca 'Enterprise' oo leh isticmaale aan xadidnayn $ 48 bishiiba. Haddii aad tahay arday, waxaad ku bixin kartaa $ 5 bishii liisanka kooxda!
Tags: iskaashiqalabka qaabeyntaqaabeynta boggaqaabeynta boggaWireframeqalabka siligga siliggasiligaynta
Agoosto 14, 2011 saacaddu markay ahayd 12:47 PM
Waad ku mahadsantahay dib u eegista Douglas. Iska ilaali nooca 3.0, ee la sii deynayo Agoosto 15.
Agoosto 14, 2011 saacaddu markay ahayd 3:24 PM
Waxaan rajeyneynaa, Wolf!